Semalt: Ihe niile gbasara Phishing Scam And Spams
Ịnata ozi iwe na mgbasa ozi na adreesị ozi-e gị na igbe post nwere ike ịbụ iwe iwe. Ụfọdụ n'ime ozi email ndị e zigara na adreesị ozi-e gị na-enye gị nfe ka a na-ewelata gị site n'aka onye hacker. Enwere ike wepu usoro mkpokọta zuru oke site na ịpị ozi email, nke a na-akpọkarị ozi mail. Ozi ịntanetị redirect redirect kọmputa njedebe ọrụ na saịtị obi, ebe ha na-n'ụzọ dị mfe manipulated na legit-dị ka ụmụ anụmanụ. Nchedo weebụ gị kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa gị.
Mgbe ị na-abụ akụkụ nke ojoro phishing, ozi ntanetị na ozi-e dị ezigbo egwu - loja de oculos online confiavel. Izu ojoo na-eme ka ndị ọrụ kọmputa jiri aka ha pịa njikọ nke chọrọ ijupụta ozi ntanye ego ha.
Julia Vashneva, Semalt Onye na-ahụ maka ndị na-azụ ahịa na-agba mbọ, dọrọ gị aka ná ntị na ndị spammers na-erubere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ kọmputa site n'izipụ nọmba ọnụ ọgụgụ nke ozi ịntanetị na ebumnuche nke ịme ihe ndị a:
Gbasaa egwu na egwu malware
Igosipụta nsụgharị phishing na ntinye nke ịnweta ịnweta nkọwa data kaadị akwụmụgwọ na okwuntughe akaụntụ
Na-eme ụfọdụ dollar n'aka ndị ọrụ PC na-azaghachi ozi ha
Atụmatụ maka otu esi chebe onwe gị pụọ na ojoro phishing na ozi ịntanetị
Ndị ọrụ kọmputa nwere ike belata ọnụọgụ email nke spam zigara ha site n'aka ndị spammers site n'itinye ndụmọdụ ndị na-esonụ ndị ọkachamara .
N'ihu adreesị ozi-e nke ọha mmadụ
Adreesị ozi-e nke ọha na eze na-ejikarị akparịta ụka na ịdenye aha na nnọkọ ọha na eze. Ndị ọrụ kọmputa na-eji adreesị ozi-e nwere ike belata ọnụ ọgụgụ ozi ịntanetị site na iji nọmba dị iche iche nke adreesị email, na-agbanwe adreesị ozi-e nke ọha mmadụ ugboro ugboro, na iji adreesị email ndị a ruo nwa oge.
Na-edebe ihe nchọgharị emelitere
Iji nsụgharị nke nchọgharị ọhụrụ na-enyere aka igbochi spammers site na iziga gị ọtụtụ ozi ozi. Ngwa nchọgharị a na - achọpụta na - achọpụta ozi spam ngwa ngwa ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere nsụgharị ndị na - agba ọsọ.
Iji adreesị ozi-e nkeonwe
A ga-eji adreesị ozi-e nkeonwe gị maka nzube nzuzo. Aha njirimara na paswọọdụ gị kwesịrị ịdị ike iji mee ka ndị na - agba ọsọ ghara ịgha ụgha. Ndị ọkachamara na-ekpuchi iji nyochaa nchedo kọmputa gị na - eme ka ị nọ n'ọnọdụ dị mma ọ bụghị naanị na ịzere ịbụ onye a na - egwu ma ọ bụ site na igbochi spammers iji zere ịnata ozi ịntanetị ugbu a na mgbe ahụ.
Tụlee iji nzacha nsị
Iji kọmputa na arụnyere malware na-enyere aka igbochi spammers site na iziga gị ozi ịntanetị spam. Jiri mgbochi anti-malware nke kachasị mma na nhọrọ mgbochi spam na atụmatụ nchekwa ka ị bụrụ ihe nchekwa.
Ịnata ozi ịntanetị ọ bụla ugbu a nwere ike ịbụ nhụsianya. Idebe kọmputa gị ka ọ bụrụ ụbọchị gị na nsụgharị anti-malware kachasị mma bụ nhọrọ kacha mma ị ga-aga. Zere ịpị ozi ịntanetị na-enweghị ịlele njirimara nke onye na-ezipụ ka ị ghara ịdị nchebe. Iji belata ọnụọgụ email nke spam zitere gị site na spammers, zere ịza ozi ịntanetị, ma zere ịpị ozi ịntanetị wepu aha na ezigara gị. Ịgbanwe ozi adreesị email gị na-arụ ọrụ mgbe mgbe. Ịrụ ọrụ adreesị ozi-e na-eme ka onye ọrụ njedebe kọmputa kwụsị. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-agba ọsọ spammers na-echefu maka njikọta ka ha ka na-anwa ịnwa ịchịkwa ihe nchọgharị gị.